Sida loo helo marin xidid ee Motorola Milestone | Androidsis
antocara | | Xididka Android, Motorola, ROM, Tababarada
Sugitaanku wuu dheeraaday laakiin hore ayuu u joogaa, horeyba waa suurtagal hel marin xidid on Motorola Milestone. Helitaanka rukhsadani waxay noo oggolaaneysaa inaan awoodno inaan u beddelno romka kuwa aan rasmiga ahayn, inaan awoodno inaan ku rakibno qaar ka mid ah codsiyada u baahan inay haystaan ​​rukhsadda noocan oo kale ah oo ay ku xirnaadaan aasaas ahaan gunta.
Waxa ugu horreeya ee la yiraahdo dhammaan macluumaadkaan waxaa laga soo qaatay shirkii Jarmalka android-hilfe.de. Laga soo bilaabo androidsis Annagu mas'uul kama nihin waxyeelada suurtagalka ah ee laga yaabo inay u geysato garoonka.
ka Talaabooyinka lagu helayo xididka marinka Motorola aad bay u yaryihiin sidii caadada u ahayd waayadan dambe, waa inaad soo degsataa feyl oo aad rakibataa
1.- Kala soo bax faylka sidan.
2. - U magacaw sida cusbooneysiinta.zip oo ku nuqul kaarka SD
3.- Telefoonka dami
4.- Riix badhanka kamarada isla markaana isla markaa badhanka korontada, saddexagal ayaa ka soo muuqan doona shaashadda.
5.- Riix mugga Up key ka dibna furaha kamaradda.
6.- Xulashooyin taxane ah ayaa ka soo muuqan doona shaashadda iyo in la kala qaado iyaga dhexdooda isticmaal furayaasha mugga
7.- Xulo xulashooyinka la heli karo midka khuseeya cusbooneysiinta.zip
8.- Cusboonaysiinta ayaa bilaabmi doonta dhamaadka waxayna codsan doontaa in dib loo bilaabo.
Markii aan dhammeeyo waxaad yeelan doontaa Motorola Milestone oo leh marin xidid. Xaqiiqdi waqti lamaheyn doono roms-kii ugu horeyay ee wax laga badalay terminalkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Sida loo helo marin u helka Motorola Milestone
La qabtay !!!, sug roms !!!
Ku jawaab MiLoX
Waxaan raacayaa talaabooyinka markaan doorto sdcard: update.zip calaamadu waxay umuuqataa E: ma furi karo / kayd / soo kabasho / amar qofna ma oga waxa aan sameynayo? Mahadsanid
kaamil ah 🙂 sideen u soo celin karaa qolka rasmiga ah? Mahadsanid
Ku jawaab awood
Luqadee ayaa hartay markii lagu cusbooneysiinayo cusbooneysiintan laga bilaabo 2.0.1 ilaa 2.1 ????
Ma Ingiriisbaa mise waa Isbaanish?
Ku jawaab Qoryaha
Waxaan guul muhiim ah ka haystaa side side shaqsiyeed .. Argentina dhexdeeda… .tb markaan raaco talaabooyinka ay igu tuurayso «E: Ma furi karo / kayd / soo kabasho / amar» si kasta oo aan u xusho «codso sdcard: update.zip» in tan liistada oo way igu tuureysaa:
Helitaanka xirmo cusboonaysiin ah …….
Xirmada cusbooneysiinta furitaanka …….
E: xaqiijin saxeex ah ayaa fashilantay
Rakibaadda ayaa soo go'day
Maxay tahay? .. Sidee lagu xallin karaa?
Marka hore sii dib-u-dejin ... Ma xasuusto magaca, waan ogahay inay tahay ikhtiyaarka saddexaad.
Ku jawaab abr4xas
Waa inaan noqdaa mid aad u dhaqdhaqaaq badan, maxaa yeelay markaan riixo kaamerada iyo dabka, waligey noloshayda kama muuqanin saddexagalka!
Ku jawaab Mendieta
Isla waxaas oo kale ayaa igu dhaca aniga oo ah Mariano, waxaan haystaa taariikh muhiim u ah Argentine "shaqsi" waxaanan sameeyaa dhammaan tallaabooyinka oo xidid kuma noqon karo, ma jiraa qof og sababta?
sida loo dhigo barnaamijka tiigsigayga Motorola
markaad rakibineyso cusbooneysiinta
si buuxda uma shubmayo sida qaladku u muuqdo
qof ma i caawin karaa fadlan
Ku jawaab beztbeatz
Waa wax aad loola yaabo, waxay ii sheegaysaa in rakibidda la joojiyay, ma awoodid
Ku jawaab nadia
Emiliano ferrari dijo
Ma jiraa qof dib feyl ugu soo celin kara faylka adeege uusan mamnuucin FBI-da wasakhda badan ???
Jawaab Emiliano Ferrari
Channel Discovery oo ku saabsan Android-kaaga
CNN Chile widget-ka Android